Xalka Gaaska Shidaalka
ACTION waxay u heellan tahay in ay bixiso hab lagu kalsoonaan karo oo lagu gaari karo nidaamka amniga gaaska shidaalka, kaas oo inta badan lagu dabaqo qalabka kaalmaha shidaalka ee kormeerka ku socda (compressors, qalajiyaha iyo guddiyada xakamaynta isku xigxiga) iyo nidaamyada ilaalinta amniga (nidaamyada la socodka amniga gaaska saldhigyada CNG, daadinta gaaska shidaalka la socodka, hababka digniinta dabka iyo la socodka muuqaalka).Nidaamku kaliya ma kormeeri karo oo ma maamuli karo saldhigga shidaalka oo dhan ammaankiisa iyo socodsiinta tooska ah laakiin sidoo kale wuxuu taageeraya gudbinta xogta qaabdhismeedka B/S iyo C/S.Waxa ay meel fog kala socon kartaa wax soo saarka saldhiga gaaska oo dhan iyo sida ay u shaqeyso server-ka dirista heerka shirkada.Xalka iyo alaabooyinka ayaa si guul leh loogu dabaqay macaamiisha soo socota:
Shiinaha Shidaalka Magaalada Shidaalka, Gaaska Khayraadka Shiinaha, Towngas, ENN, Gaaska Kunlun, Xinjiang Gas, PetroChina Sichuan Sale Branch, SINOPEC Laanta iibka Sichuan, PetroChina Urumchi Sale Branch, SINOPEC Zhejiang Sale Branch, Datong Coal Mine Group, CR Real Estate, Vanke Real Estate, BRC, Zhonghai International, Longfor Real Estate, Hutchison Whampoa iyo Capital Land.
▶ Nidaamka la socodka qaylo-dhaanta gaaska qoysku waxa uu xaqiijin karaa maamulka dhexe ee garaadka ee xaaladaha gaaska ee lakabka la helay (dadka deegaanka) iyo kormeerka dhexe ee 24-saac oo buuxa oo aan kala go' lahayn sanadka oo dhan.
▶ Qaylodhaanta guriga ACTION waxay u gudbin kartaa xogta DRMP (goob ka socodka fog ee aaladda) iyadoo loo marayo habka isgaarsiinta GPRS.Markaa badbaadada gaaska qoysku waxa ay hoos imanayaan kormeer xirfadeed 24 saacadood maalintii.
▶ Marka ay soo baxdo macluumaadka alaarmiga, nidaamka la socodka qaylo-dhaanta gaaska guriga ayaa si toos ah u bixin doona digniinta oo si sax ah oo degdeg ah u dhigi doona qaylo-dhaanta si dadka la xidhiidha ay u xamili karaan digniinta wakhtigeeda.
▶ Maaddaama aaladda lagu ogaanayo nidaamka la socodka qaylo-dhaanta gaaska qoysku ay ogaato khatar goobta taal, waxay ku siin kartaa qaylo-dhaan iyada oo loo marayo goobta nidaamka nidaamka oo ay siiso farriin gaaban si ay u xasuusiso dadka la xidhiidha inay meesha ka saaraan khatarta.
▶ Isticmaalayaashu waxay soo dejisan karaan APP-yada si ay u isticmaalaan terminaalka mobilada si ay ula socdaan xaaladaha qalabka.
▶ Nidaamku wuxuu leeyahay kharash yar oo la isticmaalo waxaana lagu rakibaa si fudud.
Alaarmiga gaaska gubanaya, lpg gaaska ogaanshaha, Shiine gaaska baadhe, qalabka gaaska, gaaska ololi kara, qalabka gaaska go'an,